Kedu ihe bụ Ethereum 2.0 na gịnị kpatara ya ji dị mkpa - Cazoo
Gịnị bụ Cazoo?
Debanye na Binance
Tinye ọchụchọ ebe a
Kedu ihe bụ Ethereum 2.0 na gịnị kpatara ya ji dị oke mkpa
Mbido » Mbido » Kedu ihe bụ Ethereum 2.0 na gịnị kpatara ya ji dị oke mkpa
Tag: ethereum, Ethereum 2.0, Igwe mebere Ethereum (EVM), Nzukọ Ethereum (EWASM), Akaebe nke Stake, scalability, Vitalik Buterin
Oge ogugu: 6 minuti
Mgbe na 2015 Ethereum banyere na isi ụgbụ, kpaliri mmasị na obi ụtọ nke akụkụ buru ibu nke ụwa ndị mmepe, yana n'ezie ndị na-etinye ego. Ihe ha tụrụ anya ya ga-eme ka ọ dị nro dịka nsogbu na nsogbu nchekwa malitere igosi na usoro. Emere mmelite na koodu ahụ, na mmepe anaghị akwụsị akwụsị, mana n'oge na-adịghị anya ọ bịara doo onye ọ bụla anya na Ethereum chọrọ ngbanwe zuru oke iji bụrụ asọmpi n'ọdịnihu. ka emechara ya n’odinihu: ya mere amuru Ethereum 2.0, ya na “koodu” ya bu Serenity.
Ndewo onye ọ bụla mara mma ma jọọ njọ. Ọ bụrụ na nke a bụ oge izizi ị na-abịa ebe a, ị nabata.
N'ebe a, na Cazoo, anyị na-akọwa ọrụ ndị kachasị adọrọ mmasị nke nnukwu ụwa nke cryptocurrencies, nyochaa ọnụahịa na atụmatụ, chọpụta ntọala nke azụmaahịa ma mee nyocha teknụzụ dị elu na mgbochi. Na nkenke, enwere ihe maka ihe niile masịrị ya.
Cazoo bụ akwụkwọ, akwụkwọ edetu, Moleskine nke ndetu nke na-enye m ohere iburu nyocha m n'isi. Emere m ya na weebụ, n'ihu ọha, n'ihi na ihe m mụtara m mụtara na weebụ, na weebụ m na-eweghachite ya n'olileanya na ị nwekwara ike iji ya. Ọ bụrụ na ọ dịrị, obi na-atọ m ụtọ na ọ.
Ka anyị gaa lee ihe Ethereum 2.0 bụ ma chọpụta nkọwa niile na-adọrọ mmasị.
Chọrọlarị ịzụta Ethereum? Ọ bụrụ na ịme nke a na Binance, jiri Ntughari ozi a: ị nwere ego kachasị elu dị, 20%, na ọrụ niile, rue mgbe ebighebi!
Nkọwa nkenke nke Ethereum 2.0
Nsogbu nke Ethereum, nke Ethereum 2.0 choro idozi
Kedu ihe ga-agbanwe na Ethereum 2.0?
Adọ 0: Akaebe nke Stake na Beacon Chain
Oge nke 1: Nkọwa
Oge nke 2: mmakọ
Oge nke atọ: EWASM
Mmetụta na ọnụahịa nke ETH na mmelite Ethereum 2.0
Ethereum 2.0 Serenity, dị ka Preston Van Loon kọwara, bụ ngọngọ dị iche karịa Ethereum dị ugbu a ka anyị si mara ya. Na ya onwe ya bu mmelite Ethereum, nke obu ezie ọ gaghị achọ a siri ike ndụdụ nke mbụ yinye.
Preston Van Ike - Prysmatic Labs Co-guzobere, Ethereum Protocol Develope
Kedụ ka ị ga - esi nweta Ethereum 2.0? Nkwụnye ego ga-eme Ukwu ego nke Ether site na ochie na agbụ ọhụrụ site na Smart Contracts. Nke a ga - abụ azụmahịa otu ụzọ, mgbe iji usoro Ethereum ketara oke kwesịrị ịkwụsị.
Dịka m kwuru na mbido, Ethereum enwetala ụfọdụ mmelite nke mere ka ọ ghara ịba ụba ma nwekwuo ike ịbawanye, na-atụ anya na ntọhapụ nke Ethereum 2.0. Mgbanwe ndị a nwere aha pụrụ iche: Homestead March 2016, Metropolis Byzantium October 2017, Metropolis Constantinople February 2019, na Istanbul December 2019.
Anyị ghọtara ihe kpatara mgbanwe ahụ: nhazi nke ugbu a nwere ọtụtụ, oke njedebe. Ihe algorithm Akaebe nke Ọrụ na ndị ọzọ akụkụ nke ije adịghị enwe ike ịnagide Mmepụta ina.
Offọdụ n'ime nsogbu ndị bụ isi bụ:
Ohere: ọ bụ a maara eziokwu na ụwa kọmputa (isi ihe gbasara Buterin na ihe okike Ethereum) jiri nwayọ. Ugbu a, usoro nkwekọrịta niile (DAPPS) na njikwa Smart na-agagharị na ya. Emere ụfọdụ ndozi na ihu a, mana ọ bịara doo anya na a Proof of Work blockchain enweghị ike ịnagide ọchịchọ.
ncheEnwebeghị mmebi nchebe ọ bụla dị mkpa na Ethereum, mana ụfọdụ ndozi mara ka ọ baara ahụike nke usoro ahụ niile uru. Nke a bụ ihe mgbaru ọsọ maka Ethereum 2.0, nke na-ezube imepụta usoro siri ike karị.
Igwe ọhụụ ọhụrụ: otu n'ime ihe ọhụrụ dị ukwuu nke Ethereum bụ ntọhapụ nke igwe arụmọrụ. Nke a bụ akụkụ nke na-agba ọsọ nkwekọrịta amamịghe ma na-eme protocol a zuru ụwa ọnụ na kọmputa. Nsogbu bụ na akụkụ a dịkwa oke nwayọ. Nke a bụ nnukwu nsogbu n'ihi na azụmahịa ọ bụla na Ethereum na-emelite ọnọdụ ụwa nke netwọk ahụ. Ugbu a, EVM (Ethereum Virtual Machine) bụ karama na usoro.
Ozugbo edepụtara nsogbu nke Ethereum 1.0, anyị nwere ike ileba anya na mmezi Ethereum 2.0 ga-eweta. Buru n'uche na mmụba ndị a dị n'ọkwa dị elu nke atụmatụ, mmepe ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ dịla mbụ amalitela, ka ga-abịa.
Akaebe nke Stake: Providence-of-Stake consensus algorithm bụ nnukwu mgbanwe ga-abịa na Ethereum 2.0. Usoro a na-eji osisi kama inye ọkụ eletrik dị ka ihe ziri ezi.
Na Proof of Work blockchain, agbụ ahụ nahash ike nke ka elu ka mma.
Na Proof of Stake blockchain, agbụ nwere ọtụtụ akụrụngwa nọ n’osisi ọ kachasị mma.
Ọzọkwa, ndị nkwado na-abụrụ isi mmalite ọhụụ ndị na-agbasa ozi. Ndị a bụ ndị ọrụ jikọtara ma ọ dịkarịa ala 32 ETH. Akụ a na-enye onye nkwado ikike ịbanye na lọtrị ka ahọpụtara ya dịka onye okike nke ngọngọ ọzọ wee nwee ike ị nweta ụgwọ ọrụ ya. Ọ bụrụ na onye nkwenye na-apụ na ntanetị ma ọ bụ emeghị ihe n'eziokwu mgbe ọ bụ akụkụ nke netwọkụ na-arụ ọrụ, ụfọdụ ma ọ bụ ihe niile Ether jiri bụrụ onye nkwado ga-ewepụ ya.
NkọwaNnukwu mgbanwe dị ukwuu na sistemụ ahụ bụ ihe eji eme ihe eji eme ihe dị ka amara azụ. Na mbu ekwuru m na nwayọ nke azụmahịa, mkpọkọta nke netwọkụ, bụ otu n’ime nsogbu ndị bụ isi nke usoro ugbu a. N'ime ụlọ ya dị ugbu a ọ dị ka enweghị oke ngwọta. N'ihi nke a, ịmepụta obere ụdọ dị iche iche (shards) nke nwere ike ịnagide azụmaahịa ọ bụla bụ echiche dị egwu na mmụba dị ịrịba ama. Polkadot na-eme nke a kemgbe amụrụ ya.
Kedu ihe bụ Ethereum 2.0 RoadMap
Dị ka Ethereum 1.0, Ethereum 2.0 ga-ebikwa na ụzọ anọ:
Oge 0: mmalite nke usoro ihe ngosi ọhụrụ nke osisi (nke a maara dị ka Casper) na mmepe nke etiti Ethereum 2.0 blockchain (nke a na-akpọ Beacon Chain);
Oge 1: mee ka ikike nke Ethereum 2.0 baa ụba site na kewaa netwọk n'ime 64 blockchains (nke a maara dị ka agbụ shard) nke ga-eme ka netwọk nwee ike ịhazi azụmahịa ndị ọzọ;
Oge nke 2: Kwado ikike nke nkwekọrịta smart nke ga - eme ka dApps gbaa ọsọ na Ethereum 2.0, ma mekwaa mmiri n'etiti etiti Ethereum mbụ na Ethereum 2.0; ndien ke akpatre
Oge nke atọ: Dika onye nchoputa Ethereum Vitalik Buterin si kwuo, uzo a ga - abu “ime ihe ndi ozo anyi choro igbakwunye ozugbo anyi malitere”, mana o gha anabata nnabata nke EVM (Ethereum Virtual Machine).
Ma ka emepụtara ka ewepụta ya na 2020, Chain Chain bụ ihe akaebe nke netwọkụ Stake zubere iso Ethereum 1.0 rụọ ọrụ. A ga-ebupụta ya naanị ma ọ bụrụ na 524.288 na Ether ejirila stakes, ma ọ dịkarịa ala, aha 16.384 ka edebanye aha dị ka ndị nyocha. Na mbu, Chain Chain agaghị abụ nnukwu mgbanwe maka ọtụtụ ndị ọrụ. Netwọk a agaghị anabata Dapps ma ọ gaghị agba ọsọ ọsọ. Ọrụ ya bụ isi ga-adị ka ndekọ maka ndị nkwado na akụkụ ha n'ime netwọkụ.
A na-ahazi oge a maka otu afọ mgbe emechara Phase 0. Na nke a, a ga-egbutu otu Chain Ethereum 1.0 Chain na obere chunks akpọ shards. Ọnụ ọgụgụ a tụrụ anya nke shards bụ 64 na mbido mbụ. Usoro a siri ike: ọ ga-enye ohere ịhazi azụmahịa na obere ụdọ pụrụ iche ma kwe nhazi data nhazi.
N'oge a, usoro ihe ngosi nke ọrụ ga-abanye na netwọkụ ọhụụ dịka otu n'ime shards, otu n'ime ụdọ. N'ihi ya, na nke a n'oge ọ bụla ọ gaghị adị mkpa ịnyefe ihe ndekọ site na otu agbụ gaa na nke ọzọ. Usoro azụmahịa nke PoW yinye ga-adị ndụ dị ka akụkụ nke Ethereum 2.0. Nke a kwesiri ime obere oge ka emechara Usoro 1.
Na nke a, obere oge mgbe agbụchara agbụ abụọ Ethereum 1.0 na Ethereum 2.0, a ga-anọchi Ethereum Virtual Machine. Enweghị ọtụtụ nkọwa gbasara usoro a, mana a ga-akpọ igwe ọhụụ ọhụụ Ethereum WebAssembly (EWASM), ebe ọ ga-adabere na usoro nchịkọta weebụ.
Site na mmelite a, Dapp nnabata na nkwekọrịta nkwekọrịta smart ga-agba ọsọ na Ethereum 2.0. Nke a pụtara na anyị ga-enwe ike ikpe ikpe mmelite ahụ agwụla naanị mgbe Ethereum emechabeghị usoro a.
Zọ ahụ dị ogologo ma na-agbagọ, mana ikike nke Ethereum 2.0 ọhụrụ emeela ka ọnụ mmiri ọtụtụ. Worldwa ga-agbanwe. Nke a bụ mmelite bụ isi nke na-agaghị abara ndị ọrụ Ethereum uru, kamakwa ọ ga-emekwa ka ụlọ ọrụ ahụ dum banye n'ọdịnihu.
Ọtụtụ kwenyere na Ethereum nwere ikike ijide na karịa Bitcoin. M na-eche otú ahụ. Nke a pụtara ịbawanye uru ya ugboro 20 ... n'agbanyeghị:
B E EtherEUM NA BINANCE, NA EGO 20% NA KWESISRS
Want chọrọ ịghọta nke ọma otú ego si arụ ọrụ?
I nwekwara ike gụọ ebe a mee ihe kachasị ego na Binance.
Biko Kee Nke a Kekọrịta ọdịnaya a
Mepee na windo ohuru
Gụọ isiokwu ndị ọzọ
Isiokwu bu nke aKedu ihe bụ Ethereum?
Isiokwu ọzọAkụkọ NFT: 2021 bụ afọ nwere nnukwu uto
.... MMADỤ N'oge adịghị anya ....
nweta ihe okike
Mwepu ego 20% na isslọrụ
Ọ bụrụ na ị ka ga-esonyere Binance, jiri koodu ntinye aka:
ma ọ bụ soro njikọ a:
Sorare: kedu asọmpi a na-enwe n'oge okpomọkụ? Emelitere 2022
Kedu ihe bụ AMM, Onye nrụpụta ahịa akpaaka?
Binance ọ dị mma? Ọ jisiri ike 30% nke ntụpọ ntụpọ nke ego crypto maka Machị 2022
Kedu mkpokọta NFT ọhụrụ na-abịa na 2022?
Metiriks ị ga-atụle maka ịzụrụ na ire NFT
Binance Smart yinye
Ebumnuche nke Cryptocurrencies
Ana m edegharị ihe m deturu n’isi. Ọ bụrụ na ha adịrị gị mma, enwere m obi ụtọ.
Merkle osisi Akara gburugburu Binance Binance na Africa Ntughari Binance Binance Ntuziaka ID Binance Smart yinye bitcoin ngọngọ Chain Boca Juniors Binance Ntuziaka Usoro Dapps Defi DEX eth ethereum Igwe mebere Ethereum (EVM) ọnwụ na-adịgide adịgide Launchpad Metamask Ngwuputa Bitcoin Nft nuncio Na-abụghị fungible tokens Ohere ọnwụ na-adịgide adịgide Ọdọ mmiri Akaebe nke Ọrụ ụkọ ihe Ntuziaka Code Binance Smart Chain Network Netwọk Ethereum centralized usoro usoro dị iche iche Nkwekọrịta Smart Sorare Kaadị ụgwọ Sorare obere kaadị Kuki kaadị Sorare Super Kaadị Ndị Pụrụ Iche nke Sorare Ụlọ ahịa Stablecoin Wepu Vitalik Buterin obere akpa Ka ịkọ ugbo
Nwebisiinka Cazoo.it 2021
Ekwesịrị m ịgwa gị na ihe nchọgharị gị na-echekwa kuki. ¯ \_ _ (ツ) _ / ¯
Ọ dị mma.